म्याटिस भन्छन कि फ्लोडको विरोधप्रति ट्रम्पको प्रतिक्रियामा उनी 'अवाक् भए' - पोलिटिकोपेथी
राजनीति र अन्तर्दृष्टि
म्याटिस भन्छन् कि फ्लोडको विरोधमा ट्रम्पले दिएको प्रतिक्रियामा उनी 'अप्ठ्यारो' भए
जुन 3, 2020 जुन 3, 2020
मध्य पूर्व सिरिया ट्रम्प
एउटा असाधारण हप्काइमा पूर्व रक्षा सचिव जिम म्याटिसले बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विरोध प्रदर्शन रोक्न सैन्य बलको प्रयोगको घोर भर्त्सना गरे र भने कि उनका पूर्व हाकिमले सेना र नागरिक समाजबीच “झूटा झगडा” खडा गरिरहेछन्।
म्याटिसले लेखेका छन्, “मैले यस हप्ताको प्रस्फुटन कार्यक्रमहरू देखेको छु, रिसाएको र हैरान भएको छु।
आलोचना सबै भन्दा उल्लेखनीय थियो किनकि म्याटिसले ट्रम्पको सिरिया नीतिको विरोध गर्न डिसेम्बर २०१ in मा रक्षा सचिवको रूपमा सेवानिवृत्त भएदेखि कम प्रोफाईल राखेका छन। उनले ट्रम्पको विरुद्धमा बोल्न अस्वीकार गरेका थिए, उनले भने कि उनी देशको सार्वजनिक मौनता राखीरहेका थिए जब कि उनको पूर्व मालिक अफिसमा थिए।
तर उनी पुलिस हिरासतमा जर्ज फ्लोडको मृत्युको जवाफमा गत हप्ताको प्रदर्शन पछि बोलेका छन्।
म्याटिसले ट्रम्पको सोमबार नजिकैको ऐतिहासिक चर्चमा हिडेको एउटा कटु वर्णन गरिएको थियो जसमा कानूनले लागू गरेकोले प्रायः शान्तिमय प्रदर्शनकारीहरूको लाफेटेट पार्क जबरजस्ती हटाइयो।
उनले भने कि उनले सपनामा पनि सपना भनेका थिएनन् "कुनै पनि परिस्थितिमा सँगी नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन गर्न आदेश दिइन्छ - जसमा निर्वाचित कमाण्डर-इन-चीफको लागि अनौठो फोटो प्रदान गर्ने र सैन्य नेतृत्वको साथ उभिने।"
“डोनाल्ड ट्रम्प मेरो जीवनकालमा पहिलो राष्ट्रपति हुन् जसले अमेरिकी जनतालाई एकताबद्ध गर्न खोज्दैनन् - प्रयास गर्ने बहाना पनि गर्दैनन्। बरु उसले हामीलाई विभाजन गर्ने कोसिस गर्छ, ”म्याटिसले एट्लान्टिकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा लेखे। “हामी जानाजानी यस प्रयासको तीन बर्षको नतिजा देखिरहेका छौं। हामी परिपक्व नेतृत्व बिना तीन बर्षको नतिजा देखिरहेका छौं। "
म्याटिसले अमेरिकीहरूलाई "उनीबिना एकजुट हुन र हाम्रो नागरिक समाजमा रहेको सामर्थ्यका बारेमा जानकारी लिन आग्रह गरे। विगतका केही दिनहरू देखाइएझैं यो सजिलो हुनेछैन, तर हामी यसलाई हाम्रा सँगी नागरिकहरूलाई दिन्छौं; विगतका पुस्ताहरु लाई हाम्रो वाचा रक्षा गर्न को लागी; र हाम्रा बच्चाहरूलाई पनि। ”
म्याटिसले प्रदर्शनकारीहरूको बारेमा भने कि अमेरिकीहरूलाई कानून भake्ग गर्नेहरू थोरै संख्यामा ध्यान नदिनुहोस्। उनले भने कि उनीहरूले सही माग गरिरहेका छन् कि अमेरिकाले सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शन हुने “समान न्यायधीन कानून” भन्ने शब्दहरु अनुसरण गर्नु पर्छ।
म्याटिसले भने, "विद्रोहको परिभाषा हजारौं विवेकले गरेका छन, जसले हामी हाम्रा मुल्यहरुमा बाँच्न आग्रह गरिरहेका छन - हाम्रो मुल्य मानिसहरुका रुपमा र हाम्रो मुल्यहरुका मुल्यहरु।"
प्रदर्शनकारीहरूलाई पछाडि सार्न बलको प्रयोगको साथ म्याटिसले विशेष मुद्दा उठाए जसले गर्दा ट्रम्पले सेन्ट जोन्स चर्चको भोलिपल्ट भ्रमण गर्न सक्थ्यो जुन आन्दोलनको समयमा आगोले क्षति भएको थियो।
“हामीलाई थाहा छ हामी कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग भन्दा राम्रो छौं जुन हामीले लाफेट स्क्वायरमा देख्यौं। हामीले संविधानलाई खिसी गर्ने अफिसमा खारेज र जवाफदेही हुनु पर्छ, "म्याटिसले भने।
यो लेख मूलतः प्रकाशित गरीएको थियो अल जेज़ररा.
अघिल्लो पोस्ट ट्रम्पले प्रमाणको बाबजुद आँसु ग्यासको प्रयोग अस्वीकार गरे: एपी तथ्य जाँच
अर्को पोस्ट ट्रम्पका पूर्व रक्षा सचिवले राष्ट्रपतिलाई कडा हप्काए, विरोधको विरुद्ध सेनाको प्रयोग गरे
युवा प्रशिक्षार्थीहरु राख्ने फर्महरूको लागि नगद
कम्पनीहरूले युवाहरुलाई प्रशिक्षार्थी नियुक्त गर्न सरकारले नगद बोनस भुक्तानी गर्नेछन्, कुलपतिले घोषणा गरे,
मेलबोर्न क्वारेन्टाइन, ह Hongक Kong, डोनाल्ड ट्रम्प: तपाईंको सोमबार ब्रीफिंग
(ईमेल द्वारा यस ब्रीफिंग प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ साइन अप छ।) शुभ प्रभात। हामी मेलबर्नमा लगाइएको कडा क्वारेन्टाइन कभर गर्दैछौं,
सर्वाधिक हेरिएको (विगत २ 24 घण्टा)
सबैभन्दा धेरै हेरिएको (विगत days दिन)
ट्विटर मा जवाफ दिनुहोस् ट्विटरमा ट्विटर मा मनपर्‍यो
थप लोड ...
आफ्नो दिमागमा कुरा गर्नुहोस्।